စိတ်ဓာတ်သည်သာအခရာ – Pann Satt Lann Books
ဘ၀ခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရာမှာ လမ်းမှားကိုရောက်မသွားဖို့ ပဲ့ထိန်းတပ်တစ်ချောင်းလိုအရေးပါတဲ့ စိတ်ဓာတ်အကြောင်းကို အခြေခံကျကျ ဥပမာ၊ ဥပမေယျတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့တင်ပြထားပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ထားတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက် မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ မလွယ်ဘူးဆိုတာက တန်ဖိုးကြီးလို့ပါပဲ။
ဒီစာအုပ်ဟာ ဖတ်ပြီးရင် ပြီးရော ထားလိုက်ရမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှသာ စာအုပ်ကပေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိခံစားနိုင်မှာပါ။
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ နိုဝင်ဘာလ (ပ-ကြိမ်)
စိတ်ဓာတ်သည်သာအခရာ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 8 ရှိပါသည်။
Mi Shweyee Win Htet (verified owner) – November 29, 2021
📙 စိတ်ဓာတ်သည်သာ အခရာ
ဒီစာအုပ်ဟာဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့သူတွေ၊အောင်မြင်မှုတွေကိုရှာဖွေချင်နေတဲ့သူတွေ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေ ဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကနေ တွေ့ရှိချက်၊အသိသစ်၊အတွေးသစ်၊လေ့လာသုံးသပ်များကို ဝေမျှပေးစေချင်တဲ့အနေနဲ့ reviewသဘောရေးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရုပ်ရည်ချောမောနေပါစေ အရေးကြီးဆုံးကတော့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်။ အတွ၊ခံယူချက်တွေ၊သဘော‌ထားတွေကို လည်း ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်။
ဘဝခံယူချက်တွေဟာ အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး ပြောင်းလဲနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီစာအုပ်ကနေ ကျွန်မကို အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ စိတ်တွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ အချိန် နောက်ကျသွားပြီး လို့ မရှိပါဘူး။
◾”ဘဝမှာဘယ်လို အခက်အခဲတွေပဲကြုံရကြုံရ အတိတ်က ဘယ်လ်ုပဲဖြစ်ခဲ့ပါစေ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင်စိတ်ထားတွေမွေးမြူဖို့ ဆိုတာနောက်ကျတယ်လို့မရှိပါဘူး။”
သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပြောင်းလဲသေးသရွေ့ သင့်အတွက်ရော၊ သင်နဲ့ပေါင်းသင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ရော ဘယ်လောက်တောင် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲ ။
ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ကိုဟာ ဆိုရင် သင့်ကို ယုံကြည်မှုခွန်အားတွေပေးပါလိမ့်မယ်။ခေါင်းဆောင်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းတွေပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကိုလည်း စိတ်ခွန်အားတွေ အားပေးစကားတွေပြောပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ပြောင်းလဲလို့ရသလားဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့တကွ သင့်ကို ရွေးချယ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကနေ ထိုလူကို အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အရှုံးကနေ တိုးတက်မှုရယူတတ်အောင် ဒီစာအုပ်က သင့်ကို သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
◾”မျှော်လင့်ချက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ အခက်အခဲတွေကို ရဲကဲရင်ဆိုင်ပြီး အရှုံးဆိုတာ ဘဝခရီးလမ်းရဲ့အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုလို့ မြင်ဖို့လိုတယ်။အရှုံးမရှိရင် တိုးတက်မှုလည်းမရှိနိုင်ဘူး”လို့ စာရေးဆရာက ခွန်အားတွေပေးထားခဲ့တယ်။အခက်အခဲရဲ့စွမ်းပကား ကြီးမားပုံတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
အောင်မြင်မှုဟာ ခရီးလမ်းတစ်ခုဆိုရင် အဲဒီခရီးကို ဘယ်လိုစလှမ်းမလဲ။
◾”အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုလည်းသိ၊ကိုယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ဖြစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့နဲ့သူမျကို အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ မျိုးစေ့တွေစိုက်ပျိုးဖို့ပဲ”တဲ့
သင်လည်း သင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ဒီလိုသာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုဟာ သင်အတွက်သာမက အများကျိုးအတွက်ကိုပါ သင်ဆောင်ရွက်လိုချင်စိတ် အလိုလို ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ မပြည့်စုံသေးတဲ့သူ၊ကိုယ်လိုချင်တာကိုရှာဖွေနေရတဲ့ သူ
ဆိုပေမဲ့ သင့်မှာ မှန်ကန်တဲ့သဘောထား ရှိနေသရွေ့ သင့်ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတွေဟာ တိုးတက်နေဆဲပါပဲ။ဒီအချက်ကို ခံယူထားတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ရတယ်။
ကျွန်မသတ်မှတ်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး သိရှိလာခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ တူညီနေသယောင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ “မနေ့ကထက် ဒီနေ့ပိုကောင်းလာအောင် လုပ်နိုင်စွမ်း”ပါပဲ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်း” ဒီနေ့ထက် မနက်ဖြန် ပိုကောင်းလာအောင် ကြိုးစားခြင်း”ပဲ တဲ့။ အမှန်တော့ အတူတူပါပဲ။
အောင်မြင်မှုကို အခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရှာဖွေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူကိုအတုခိုးတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တစ် ကမ္ဘာလုံးမှာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ သူတစ်ဦးဟာ သင်ရဲ့စွမ်းရည်တွေပါပဲ။
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မဟာ ဒီကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ တူမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို မွေးမြူနိုင်အောင် ကြိုးစားရတော့မယ်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှာ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်သဘောထားတွေရှိ
နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရရှိလာတဲ့
ကြားဖူးကြမှာပေါ့။ သာမန်အချိန်မှာ ကျွန်းသေတ္တာတစ်လုံး ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မ,မ နိုင်ပေမဲ့ မီးလောင်တာမျိုးအရေးကြုံလာတဲ့ခါ ကိုယ်တောင် သတိမထားမိပဲ ဘယ်လိုမထုတ်ပစ်မှန်းမသိ၊ ကျွန်းသေတ္တာကြီးက လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ။ …. အခေါက်ပေါင်း တစ်ထောင်မက အမှားအမှားအယွင်းယွင်း ကြိုးစားပြီတဲ့နောက် အမှောင်ထုကို ခွင်းနိုင်တဲ့ မီးသီး လေး ယနေ့ ကျနော်တို့ အသုံးပြုနေနိုင်ပြီ။ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ? သိတဲ့အတိုင်း “စိတ်စွမ်းအား” ပေါ့။ စိတ်က ခန္ဓာကိုယ်ကို ပဲ့ကိုင်တယ် ဆိုတာ ဧကန်အမှန်ပဲလေ။ ဆိုတော့ ဒီအရာတွေက မှန်ပါတယ်ဆိုတာကို ဒီစာအုပ်က ထောက်ပြသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ လူတစ်ယောက် ဘဝခရီး လျှောက်လှမ်းနေချိန် ကိုယ့်ရဲ့ ❝စိတ်နေစိတ်ထား❞ ဘယ်လိုထားရမလဲ။ ဒီ ❝စိတ်နေစိတ်ထား❞ က ကျန်နော်တို့ကို ပဲ့ကိုင်နေတဲ့ ❝စိတ်စွမ်းအား❞ နဲ့ ဘယ်လောက် အကျိုးသက်ရောက်သလဲ ဆိုတာတွေကို ဥပမာ သာဓက များစွာ၊ စာရေးဆရာရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများစွာ နဲ့ အချက်ကျကျ ရှင်းလင်းပြောပြထားတာပဲဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ အော်နေကျ ❝အထက်တန်းစိတ်ဓာတ်❞ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ထိုမျှမက ❝စိတ်ဓာတ် ဆိုတာ မွေးကတည်းက သည်အတိုင်းပဲလား။ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားအောင် လုပ်ယူနိုင်သလား။ ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုကြားက ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။ လူ ဖြစ်လာရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ ပါရမီ ရှိတဲ့သူက ပိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား။ ၂၁ ရာစုမှာ ကျနောတို့တွက် မရှိမဖြစ် အရည်အချင်းက ဘာဖြစ်မလဲ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဘာက အရေးကြီးဆုံးလဲ။❞ စတဲ့ စတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပြ ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်တယ်။
မူရင်းရေးသားသူ John C. Maxwell ဟာ ခရစ္စယာန်သင်းအုပ်ဆရာ ဖြစ်တဲ့အလျောက် သမ္မာကျမ်းစာ မှ ပုံပြင်များကို (David and Goliath, Joseph, the Lost son…. ) သာဓကအနေနဲ့ ကိုးကားသွားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Bible Stories တွေကို Theological view or Perspective of Religion နဲ့ ရှင်းပြတာထက် Practical point of view ကို ဦးစားပေးပြီး ရှင်းပြသွားတာ များတဲ့တွက် ခရစ္စယာန်တွေတွက်လဲ တမျိုးတဖုံ သင်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ (ဒီအချက်ကို ကျနော် တော်တော်လေး သဘောကျတယ်)
☘️📚 ဆိုတော့က…. ဖတ်ရတာပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ ကျနော်တို့တွက် အဓိက အခရာ အရေးပါသော ❝စိတ်နေစိတ်ထား❞ အကြောင်းကို မဖြစ်မနေဖတ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တော့ တွေးမိတဲ့တွက် ဒီစာညွှန်းရေးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်သော လူငယ်တွေ လုံးဝ လက်မလွှတ်သင့်သော စာအုပ်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။